नेपालमा बिहीबारदेखि पर्यटन क्षेत्र खुल्दै, कस्तो छ स्वास्थ्य सुरक्षा ? | We Nepali
नेपालको समय: १०:१६ | UK Time: 05:31
नेपालमा बिहीबारदेखि पर्यटन क्षेत्र खुल्दै, कस्तो छ स्वास्थ्य सुरक्षा ?
२०७७ साउन १३ गते ८:४०
काठमाडौँ। नेपालमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । अहिलेसम्म १८ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन् भने पाँच हजारभन्दा बढी अझै पनि उपचाररत छन् । तेह्र हजारभन्दा बढी व्यक्ति निको भएर घर फर्किसकेका छन् । तर सङ्क्रमणको जोखिमका कारण गत चैत ११ देखि शुरु गरिएको बन्दाबन्दी भने विस्तारै खुल्दैछ । लामो समयपछि सरकारले यही साउन ५ गतेबाट लामो दुरीका यातायात, हवाईसेवा र शिक्षण संस्था बाहेकका क्षेत्रमा बन्दाबन्दी हटाएको छ । काठमाडौँलाई बन्दाबन्दीबाट खुला गरी आर्थिक क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउने रणनीति सरकारले लिएको छ ।
अघिपछि व्यवसाय नखुल्दा, बन्दाबन्दी जारी रहँदा मानिसको भीडभाड कम हुन्थ्यो । जोखिम कम थियो । साउन १५ देखि भने त्यो अवस्था रहँदैन । त्यसैले जति भीडभाड भयो उत्तिकै सावधानी पनि जरुरी छ । त्यसबेला व्यक्तिले मात्रै सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर हुदैन । कुनै होटल सञ्चालन गर्नुपर्यो भने होटलका सबै क्षेत्रलाई सङ्क्रमणरहित (डिसइन्फेक्सन) गर्नुपर्छ । अन्य पर्यटन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र होस् या अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि यही मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । आउने र जाने मान्छेलाई समेत ख्याल गर्नुपर्छ । उनीहरुले पनि स्वास्थ मापदण्ड अपनाउनुपर्छ । तब मात्रै यसबाट जोगिन सकिन्छ ।
खेम्स क्लिनिङ्ले अहिले पशुपति क्षेत्रलगायत केही अस्पताल, होटल, अन्य सेवा क्षेत्र, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, यातायात क्षेत्र, बसपार्कलगायतका स्थानमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड बमोजिम सरसफाइको काम गर्दै आएको छ । त्यसका लागि उक्त कम्पनीले मापदण्ड तयार पारेको छ र त्यस मापदण्डलाई ती क्षेत्रमा लागू गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले निर्देश गरेको योजनाका साथै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डलाई समेत ध्यान दिएर सो कम्पनीले स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेडिउर (एसओपी) अपनाएको छ ।
उहाँका अनुसार पशुपति क्षेत्रमा यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेका छ । त्यहाँ धेरै मानिस आउनसक्ने भएकाले क्यामरा स्क्यानिङ गरेर त्यसबाट ज्वरो नाप्न मिल्ने स्वचालित प्रविधिको प्रयोग हुँदैछ । साधारण पूजा, विशेष पूजा र जात्राका लागि खोल्ने योजना रहेको पशुपतिमा सोही अनुसारको स्वास्थ्य मापदण्ड तयार पारेर लागू गर्न खोजिदै छ । त्यसका लागि दक्षजनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । उनीहरु प्रशिक्षित हुनुपर्छ । त्यसपछि राम्रो ‘केमिकल’ र उपकरण पनि उत्तिकै भरपर्दाे हुनुपर्दछ ।
होटल एशोसिएसन नेपालका अनुसार मुलुकका होटल क्षेत्रमा मात्र करिब रु १६ खर्ब लगानी छ । यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सात लाखभन्दा बढी जनशक्तिले रोजगारी पाएका छन् । यसबाट करिब २५ प्रतिशत विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरेको छ । कोभिड– १९ ले आर्थिक समृद्धिको आधार मानिने पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । प्रत्येक महिना यस क्षेत्रले कम्तीमा पनि रु एक अर्ब ८० करोड घाटा व्यहोर्दै आएको होटल एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सृर्जना राणाको भनाइ छ । अन्य पर्यटनसँग जोडिने हवाई उड्डयन, सडक यातायात, ट्रेकिङ, घरबासकार्यक्रममा भएको आर्थिक क्षति अनुमान गर्न सकिन्न । अध्यक्ष राणाले सरकारले होटल व्यवसाय सञ्चलन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै यसका आवश्यक जनशक्तिलाई तालीम दिएर तयार पारिएको पनि बताउनुभयो ।
यस्तो अवस्थामा खुला हुनलागेका व्यवसाय सेवा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षित पार्नु अर्काे चुनौती हो । क्षेत्रीय होटल सङ्घ चितवन, सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराई बाह्य राष्ट्र कोरोनाबाट बढी प्रभावित भएकाले पर्यटक आगामन हुँदा अझै सावधानी अपनाउनु जरुरी छ भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार सौराहाका होटलसमेत आवश्यक सरसरफाइ र सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गरेर मात्रै खुल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।